Warm Transparency Chipatara - Dhizaini magazini
Chipatara Pagungano, chipatara chinowanzoita kunge nzvimbo isina ruvara rwechisikigo ruvara kana chinhu nekuda kwechinhu chakaumbwa chechimiro kugadzirisa basa nekunyatsoita. Naizvozvo, varwere vanonzwa kuti vari kusiyaniswa nehupenyu hwavo hwezuva nezuva. Kuongororwa kwenzvimbo yakasununguka apo varwere vanogona kushandisa uye vasina kushushikana, kunofanirwa kutorwa. Vagadziri veTSC vanopa nzvimbo yakazaruka, yakagadzikana nekuisa yakavhurika L-yakavhurika nzvimbo yedenga uye makuru makuru nekushandisa yakawanda yehuni matanda. Kujeka kunodziya kwechivakwa ichi kunobatanidza vanhu uye mabasa ekurapa.
Zita rechirongwa : Warm Transparency, Vagadziri zita : Yoshiaki　Tanaka, Izita remutengi : TSC Architects.
Chipatara Yoshiaki　Tanaka Warm Transparency